ပန်ဒိုရာ: ငါ့ရဲ့ ရွှေရောင်သဲပွင့်တွေ
“လုံလောက်တဲ့ နာမ်တရား ပေးသနားတော်မူပါအရှင်…
အိပ်မက်များ တဒင်္ဂ မက်ပါရစေ... ။”
ထိတယ် မပန်ရေ။ (ခေါင်းကို ခဲမှန်တာ မဟုတ်ဘူး နော် :D) ကဗျာက တစ်ကယ် မိုက်တယ်။
ပုထုဇဉ်: မပန်ကတော့ ပန်ဒရာ နတ်တဂိုး ပဲဗျာ... လက်ထဲက သဲတွေ ခုချက်ချင်းပဲ ပြေလျော့သွားသလိုပဲ။ ဟီး... ကီးဘုတ်ရိုက်ရင်း လက်ဖ၀ါးတောင် ယားလာတယ်၊ အဲဒီလို သရုပ်ဖော်ကောင်းတာ။ (ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် ပွေးပေါက်ချင်တာ )
Tesla: ကွန်မန့်ထဲဝင်တာ ၀င်လို့ကို မရတာဗျာ..
23 Jun 07, 12:06
Tesla: ဒေါ်ဂျီးပန် မောနင်းပက် ထပ်ချရသေးလား.. ရွှေရောင်သဲပွင့်လေးတွေ က ကောင်းလိုက်တာ. တလက်လက်နဲ့ လွှင့်ကြသွားတာ မြင်လိုက်တယ်. အဲ တပွင့်တလေလေးမှ မဆုပ်မိဘူးလား..
မေဓာဝီ: ပန်ပန်ရေ ... ကွန်မန့်ထဲကို ကြိုးစားဝင်သော်ငြား ကွန်နက်ရှင်ကား မကောင်းပါသောကြောင့် လက်လျှော့လိုက်ပြီး .. ဆီဗုံးမှာသာ လာရေးလိုက်ပါ၏။ (ရွှေရောင်သဲပွင့် တွေကို ဆုပ်ကိုင်လိုသော .. မမေ )
အစ်မပန်ဒရာနတ်တဂိုးရေ ကဗျာလေး ခံစားသွားတယ်။ သဲပွင့်က ဘယ်တုန်းက ရွှေရောင်ပြောင်းသွားတာလဲ
နှစ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ အိပ်မက်တွေ မက်ပြီးလောက်ပါပြီ မမက်ရသေးရင်လည်း မက်နိုင်ပါစေလေ။